Semalt: I-WordPress 10 Iiplani ezininzi ezidumile ngo-2017
I-plugin ye-WordPress inesixanduva sokwandisa ukusebenza kwewebhusayithi. Kananjalo ifaka iimpawu ezintsha kwiindawo ze-e-commerce kunye neeblogi kwaye zibhalwa kwiilwimi ze-PHP. Iiplagizi zenza kube lula ngathi ukuba senze izinto ezintsha, imibala, kunye neendlela ezikhoyo kwiwebhusayithi yethu.
Ukukhetha i-plugin ye-WordPress engcono kunokuba nzima, kodwa apha uFrank Abagnale, oyingcali ephezulu ye-10 (Semalt , uxoxe ngeeplani ezili-10 ezidumileyo ze-WordPress kulo nyaka.
1 - nordexx dekk. SEP WordPress nge Yoast
Ngenye yeefowuni ezidumileyo kunye ezisetyenziswa kakhulu kwi-WordPress nge-Yoast. Le plugin ye-SEO inceda ukongeza izihloko kunye nenkcazo kwizithuba zakho zeblogi kwaye kukuvumela ukuba ungeze iirafu ezivulekileyo kunye nedatha yemeta. Unokwenza kwakhona uhlalutyo lwekhasi lakho, unokushicilela i-xml sitemaps kwaye wenze okungakumbi nge-plugin ebanzi.
I-BackupBuddy iyi-plugin ye-WordPress elula ukuyisebenzisa kunye nobungane. Oku kukuvumela ukuba ulondoloze iifayile zakho kwaye uncedise ukucwangcisa amanqaku akho. Ukongeza, i-BackupBuddy inceda ukukhusela umxholo wakho wewebhu kumasela nakwiintsholongwane. Igcina iifayile ezigcinwe kwifu nakweminye imemori.
3. I-W3 I-Cache Iyonke
Isantya sewebhusayithi yakho ibaluleke kakhulu ekuphuculeni injini yokusesha usezingeni. Nge-W3 I-Cache Iyonke, unako ukwandisa isantya sakho kwisayithi kwaye unganciphisa ixesha lokulayisha, eliya kunciphisa izinga lakho lokukhupha.
I-WPForms yenye yeendlela ezifanelekileyo zomsebenzisi kunye nezilungelelaniso ezifanelekileyo..Ikunceda ukudonsa nokulahla abafaki befom ye-intanethi kwaye kukuvumela ukuba udale ifom ye-imeyli yokubhaliselwa, ifomu yokuhlawula, ifom yolawulo kunye nezinye iintlobo zeefom ye-intanethi. I-version yayo yamahhala inhle ukuhamba nayo, kodwa unokuzama kwakhona inguqulo ehlawulwayo.
Ukuba uyi-imeyile okanye umthengisi wezeendaba zentlalo, unokufuna ukuzama u-OptinMonster. I-Plugin enkulu kunye emangalisayo kunye neendlela ezisetyenziswa ngokubanzi ngabantu abashishini. Oku kunceda ukwandisa inani labathumeli be-imeyile kwaye uguqula ababhalisile bakho kubathengi abonwabileyo.
6. Hlela Umlambo
Nge-Edit Flow, ungahlela amanqaku akho abhaliweyo ngaphambili. I-plugin ye-WordPress ikunceda ulawule amakhalenda ahleliweyo, izimvo, kunye nezikhundla zebhulogi rhoqo. Unokwenza izicwangciso zayo ngokwezifiso zakho kunye nokucwangcisa isicwangciso sokuthengisa isicwangciso seziphumo ezilungileyo.
Kukhuselekile ukutsho ukuba iSiloquy yiyona iplani yePlogin yeyona ndlela ifanelekileyo yewebhusayithi. Oku kukuvumela ukwandisa ukusebenza kwesiza sakho ngaphandle kokulimaza i-SEO yayo. I-plugin kulula ukuyifaka kwaye ixutywe ngabahluleli abahlukeneyo kunye ne-blazers ekukhethiweyo.
I-Sucuri yiplagijethi epheleleyo ekunceda ukubeka iliso ukhuseleko kunye nekhuseleko lewebhusayithi yakho. Ukuba ufuna ukukhusela abahlaseli okanye iintsholongwane ekuhlaseleni amasayithi akho, kufuneka ufumane iSuuri njengoko unikezela izilumkiso zexesha langempela, i-scanners, kunye neenkonzo zokususwa kwe-malware.
9. Ibharari yeNtlalontle ehlalayo
I-Bar yeNtlalo yezentlalo enomnye wezona zixhobo zezona zorhwebo ezilungileyo. Kufezekile kwiiwebhusayithi zeWindowsPress kwaye zinokukhethwa kwezinto ezingapheliyo zoluntu. Le iplagin ikuvumela ukuba ungeze izixhumanisi zentlalo yoluntu oluncedo ukubandakanya abasebenzisi abaninzi kunye nabaninzi.
Le iplagin ye-WordPress engapheli inokukhetha ezininzi kwaye ilawula amazwana akho kwiwebhusayithi. I-plugin yenkampani yesithathu engathinteli umncedisi wakho kwaye yenza imisebenzi eyahlukeneyo.